कावासाेती १२ माघ । नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालीका २ कोल्हुवामा दुर्लभ एकसिंगे गैडा संरक्षणको सन्देश प्रवाहाका लागि राईनो संरक्षण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । यही फागुन ५ गतेबाट प्रतियोगिता हने आयोजक नन्द भाउजु मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिएको हो ।
बिगत १६ वर्षबाट संचालन हुदै आएको प्रतियोगितामा विभागिय तथा ए डिभिजनका टिम सहित १२ टिमकाे सहभागिता रहने नन्दभाउजु उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दोमन बहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न १ कराेड १० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई नगद रु. १० लाख, द्वितीय हुने टिमलाई नगद रु. ५ लाख र प्रत्यक खेलको उत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद रु. १० हजार, प्रतियोगीता भरि उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई नगद रु. २० हजार, सर्वाधिक गोलकर्तालाई नगद रु. २० हजार साथमा प्रमाण पत्र, शिल्ड प्रदान गरीने छ भने म्याच मनि क्वाटर फाईनल चरणको खेलमा प्रतिटिम १० हजारका दरले, सोमी फाईनल चरणमा २० हजारका दरले र फाईनल चरणका लागी ३० हजारका दरले पुरस्कार प्रदान गरीने छ ।